ကျနော်တို့လတ်ဆတ်တဲ့ငရုတ်သီးဖြတ်တောက်အခါ, ငါတို့လက်ကောင်းသောမခံစားရ, ငါတို့ဘာလုပ်သင့်တယ် - တရုတ်လူးလူးစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းကိရိယာ
ကျနော်တို့လတ်ဆတ်တဲ့ငရုတ်သီးဖြတ်တောက်အခါ, ငါတို့လက်ကောင်းသောမခံစားရ, ငါတို့ဘာလုပ်သင့်တယ်
ငရုတ်သီးအများကြီးမိသားစုများအသုံးပြုတဲ့ရာသီဖြစ်ပြီး, ကုန်တယ်ငရုတ်သီး၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်သောကြောင့်ထဲမှာ capsaicin seasoned နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကငရုတ်သီး, ငါတို့လက်အနီရောင်ဖြစ်လာ, အဖျားနှင့်ပင်ဉျြးဖဉျြးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ပြီးနောက်။
သူတို့ capsaicin လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမဆံ့သောကြောင့်, ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်း piquancy ထုတ်လုပ်ရန်။ ကလူငရုတ်သီးဖြတ်သည့်အခါထိုသို့သောလက်တော်၏နောက်ကျောနှင့်လက်ရုံးတော်၏ရှင်းလင်းသောအသားအရေအတိုင်း, သင်တို့၏အသားအရေပေါ်မှာ capsaicin ရလွယ်ကူသည်။ Capsaicin microvasodilation လှုံ့ဆော်နိုင်ပြီး, အသားအရေထွက်ဒေသခံဇီဝြဖစ်အရှိန်မြှင့်, အနီ, အဖျားနှင့်ပင်ဉျြးဖဉျြးကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
ရေအေးအတွက်သင်၏လက်ကိုဆေးကြောဘယ်တော့မှမ။ အဘယ်ကြောင့်? အဆိုပါ capsaicin ရေအေးထဲမှာပျော်ဝင်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်သန့်ရှင်းဆေးကြောမရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကလူ capsaicin ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွသောအခါ, တခါမှာရေအေးအတွက်မိမိတို့လက်ကိုဆေးကြောခဲယင်းဉျြးဖဉျြးသွားစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်း၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့နဲ့အခြားနည်းလမ်းများကိုသုံးပါ။
1. တဦးတည်းဦးတည်ချက်အတွက်အရက်ချည်ဘောလုံးကိုနှင့်အတူတို့လက်သုတ်, ငရုတ်သီးခုတ်ပြီးနောက်သန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူလက်ကိုဆေး, တဖနျခွောကျသှေ့သုတ်, ရောဂါလက္ခဏာများလျော့ကျစေနိုင်သည်သည်အထိသုံးကြိမ်သုတ်။
ရှာလကာရည်အက်ဆစ်သည်နှင့် capsaicin နှင့်အတူဘက်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှာလကာရည်၏ 2.A သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလည်းလက်ကိုဆေးဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
3, ရှာလကာရည်မပါဘဲ, ရေပူရေအေးနှင့်အတူလက်များကိုဆေးကြောလည်းကောင်းလှ၏။ capsaicin မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာနာကျင်ကျိန်းစပ်ရေငွေ့ပျံထုတ်လုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Capsaicin သျောလျော့နည်းအစွမ်းထက်အရက်နှင့်ရှာလကာရည်ထက်, ရေအေးထက်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိပါသည်။